N5 Basic သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်
၂၃-၀၂-၂၀၁၈ မှ ၂၅-၀၃-၂၀၁၈ ထိ
Japan Sai - Japanese Language Training Center ၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ
အမှတ် ၇၀| ၄ လွှာ B မဟာမြိုင်လမ်းနှင့် ကျွန်းတောလမ်း ထောင့် (ဒိုးလေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အပေါ်ထပ် )စမ်းချောင်းမြို့နယ် ရန်ကုန်။
(ပြည်လမ်း-မဟာမြိုင်မှတ်တိုင် သို့မဟုတ် ဗားကရာလမ်း-ရှမ်းလမ်းမှတ်တိုင်မှတဆင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။)
&phone;: 09 425 736 562, 09 774 252 666, 09 953 362 626
Facebook Page : https://www.facebook.com/japansaijapaneselanguagetrainingcenter/
Japan Sai - Japanese Language Training Center ၏ အမှာစကား
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ Japan Sai - Japanese Language Training Center မှ ဖြစ်ပါတယ်။
Japan Sai - Japanese Language Training Center တွင် N5 Basic သတင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် ဆုအား ကံထူးရှင်(၃)ယောက် အတွက် မဲဖောက်ပေးမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ကံစမ်းပေးမှုအတွက် အားလုံးကို ကျေး ဇူး အထူး တင်ရှိပါတယ်။ ပါဝင်ကံစမ်းသော မိတ်ဆွေများကိုလည်း Japan Sai - Japanese Language Training Center မှ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
❀ Japan Sai - Japanese Language Training Center မှ ကြိုဆိုပါတယ် ❀
ရုံးချိန် ပြင်ပ ဂျပန်စာ သင်ယူချင်သူများ အတွက်
အခြေခံ Basic 1 (N5)အတန်းအား 28 သြဂုတ် 2017, တစ်ပတ် ၃ ရက်- တနလာင်္ မှ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သင်တန်းကာလ ၃လ ၊ နာရီပေါင်း ၇၀ နာရီ ၊ ညနေ6:30 ~ 8:30 တန်းခွဲ သစ်ဖွင့်လှစ်ပါမည်။
ပထမဦးဆုံး စာရင်းသွင်းသူ ၅ဦးအား 5% Discount နင့် Japan Sai T-Shirt လက်ဆောင် ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါး အပ်ပါသည်။
စာရွက်စာတမ်းကြေး + CD + ဖတ်စာအုပ် + သင်တန်းကြေး အပြီးအစီ = 90,000ကျပ်တိတိ
မှတ်ချက် - အခြားမည်သည့် အခကြေးငွေမှ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
2018 July အမှီ JLPT (N5 special Class )
ဂျပန်စာကို အခြေခံမှ စနစ်တကျ သင်ချင်ပါသလား? JLPT N5 ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုချင်ပါသလား ?
Class - N5(special)
Period - 3.5 month
Day - Mon,Tue,Thu,Fri
Time- 9:00 - 11:00
Japan Sai မှာ N5 special အတန်း တက်ပြီးတာနဲ့4Skills + Kanji ကို တစ်ခန်းမကျန် multimedia သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများဖြင့် ၁ခန်း မကျန် အမှန်တကယ် သင်ကြားပေးပါသည်။ N5 special အတန်း တက်ပြီးပါက အခြား မည့်သည့် Kanji အတန်း ၊ listening အတန်း၊ စာမေးပွဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မူ အတန်းများ ထပ်တက်ရန် မလိုအပ်တောပါ။ ဖော်ပြပါ သင်တန်းကြေးတွင်စာရွက် စာတမ်းကြေး + စာအုပ်ကြေး + CD အားလုံး အပြီးအစီး ဖြစ်သည် အခြား မည်သည့် အခကြေးငွေမှ ပေးဆောင်ရန် မလိုတော့ပါ။ လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားလို့ မြန်မြန် စာရင်းသွင်းထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်
မနက် 9:00 နာရီမှ ညနေ 7:30 အထိ
မနက် 9:00 နာရီမှ ညနေ 5:30 အထိ
အတန်း ၁တန်းတွင် လူဦးရေ ၁၀ ဦးသာ လက်ခံပြီး ၁ခန်း ပြီးတိုင်း listening နှင့် video ကြည့်ခြင်း
Level အလိုက် ခန်းဂျီး အလုံးရေ အပြည့်အဝကို အမှန်တကယ် ကို စနစ်တကျ သင်ကြားခြင်း
ဂျပန်စာသာမက ဂျပန်လူမျိုး တို့၏ ရိုးရာ ဓလေ့စရိုက်များကို သင်ကြားပေးခြင်း
အချိန်ကို လေးစားပြီး ဂျပန်လူမျိုးတို့ နည်းတူ ကြိုးစားခြင်သူ များအတွက် အထူးသင့်လျော် ပါသည်
ဖော်ပြပါ သင်တန်းကြေးတွင် စာရွက် စာတမ်းကြေး + စာအုပ်ကြေး + CDအားလုံး အပြီးအစီး ဖြစ်သည် အခြားမည်သည့် အခကြေးငွေမှ ပေးဆောင်ရန် မလိုတော့ပါ။ အတန်းတိုင်းတွင် လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားလို့ မြန်မြန် စာရင်းသွင်းထားမှ စိတ်ချရမယ်နော့